झापाको भद्रपुरमा सिभिल बैंकको शाखा Bizshala -
काठमाण्डौ । सिभिल बैंकले झापा जिल्लाको भद्रपुरमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ ।
सो शाखाको उद्घाटन सिभिल बैंकका संचालक प्रकाश तायलले गरे ।
सो शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुखअतिथिमा सिभिल बैंकका संचालक प्रकाश तायल, बिशिष्ट अतिथिमा प्रदेश नं १ का प्रदेश सभा सदस्य ओम प्रकाश सरावगी, बिशेष अतिथिमा भद्रपुर नगरपालिका मेयर जिवनकुमार श्रेष्ठ, अतिथिमा भद्रपुर नगरपालिका उपमेयर चन्द्रमाया श्रेष्ठ, कार्यक्रम सभापतिमा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ, सिभिल बैंकका क्षेत्र नं १ का क्षेत्रिय प्रबन्धक सन्तोषकुमार बुढाथोकी लगायत सो क्षेत्रका राजनीतिक व्यक्तित्वहरु, उद्योगी, व्यवसायी, गन्यमान्य व्यक्ति तथा सर्वसाधरणको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि तथा भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जिवनकुमार श्रेष्ठले भद्रपुर क्षेत्रको बढ्रदो आर्थिक गतिविधिलाई सिभिल बैंकको यस शाखाले थप टेवा पुर्याउने कुरा बताए ।
सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले आर्थिक विकासका लागि बैंक अपरिहार्य रहेको बताए । सिभिल बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्ग तथा अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुका हितलाई ध्यानमा राखी बचत परिचालनका योजनाहरु ल्याउने र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनुका साथै प्रविधिकेन्द्रित सेवा सुविधालाई परिस्कृत गर्दै लैजाने र आफ्नो पहुँचलाई विस्तार गर्दै व्यवसाय अभिवृद्वि गर्दै जाने कुरा पनि बताए ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा गत वर्षका लागि १२.७५% बोनस सेयर
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि...
जनता बैंकमा खाता छ ? ग्लोबल आईएमई बैंकमा गएर परिवर्तन
काठमाण्डौ । आपसमा गाभिएका ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक नेपाल...
कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा एनआइसी एशियाको बिस्तारित काउण्टर
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकले कपिलवस्तुमा कृष्णनगर विस्तारित...
ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक बिहीबार बन्द रहने, शुक्रबारबाट
बैंकर्स संघको अध्यक्षमा भूवन दाहालको उदय, सदस्यमा चार नयाँ
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघको नयाँ अध्यक्षको रुपमा भूवन दाहालको...
रा.वा. बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा निर्मलहरि अधिकारी...
महालक्ष्मी विकास बैंकलाई साफा उत्कृष्ट वार्षिक वित्तीय
काठमाण्डौ । सार्क राष्ट्रहरुको लेखाव्यवसायलाई नियमन गर्ने...
एनएमबि बैंक साफामा कर्पोरेट गभर्नान्ससहित दुई अवार्डबाट
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक सार्क एनिभर्सरी अवार्ड फर कर्पोरेट...